မိဘကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? - Chit MayMay
Home Lotaya မိဘကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းက ရိုလာကိုစတာ စီးရသလိုပါပဲ။ သင့်မှာ ပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်တွေ၊ စိုးရိမ်ရမယ့်အချိန်တွေ၊ မေ့မရနိုင်မယ့် အချိန်တွေ၊ ပျောက်ပျက်သွားချင်မယ့် အချိန်တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲတွေ့ကြုံရပါစေ၊ မိဘကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့တာဝန်တွေက မပြောင်းလဲပါဘူး။ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိဘဆိုတာ မရှိပေမယ့် ကျွန်မတို့အားလုံးက အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြရပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ကျွန်မတို့ မိဘကောင်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ?
ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ မိဘကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အသွေးတွေအကြောင်း ပြောပြပြီး ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဆိုတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
မိဘတစ်ယောက်ဟာ ချစ်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့် စိတ်ရှည်ခြင်းတို့အပြင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံမှု၊ စာနာမှုနှင့် သတိဝီရိယတို့ ရှိရပါမယ်။ ဒါကတော့ မိဘကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ- ကျွန်မတို့သားသမီးတွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် ကျွန်မတို့က သူတို့ကို ချစ်နေဆဲပါ။သို့သော် မိဘကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ တာဝန်သိမှုကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး သူတို့အမှားလုပ်တဲ့အခါ အမှန်ပြင်ပေးပါတယ်။ သူတို့က မျက်ကန်းအချစ်နဲ့ ကလေးတွေကို မချစ်ပါဘူး။
စာနာမှု- မိဘကောင်းတွေက ကလေးရဲ့ရှု့ထောင့်ကနေ ကြည့်တတ်ပါတယ်။ သူတို့က ကလေးရဲ့နေရာမှာ ဝင်ခံစားပေးပြီး တုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အလွန်အမင်း ဖိအားမပေးသလို သူတို့ကျရှုံးတဲ့အခါမှာ လှောင်ပြောင်တာတွေ မလုပ်ကြပါဘူး။
ရှေ့နောက်ညီညွှတ်မှု- မိဘတွေဟာ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေ၊ စည်းမျဉ်းတွေနှင့် အကျိုးဆက်တွေကို ပြဌာန်းတဲ့နေရာမှာ တစ်သမတ်တည်းရှိကြပါတယ်။ ပုံမှန်တသမတ်တည်းရှိတာက ကလေးတွေကို လုံခြုံမှု ခံစားရစေပါတယ်။ ၎င်းက အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ မွေးမြူဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ပြောဆိုဆက်ဆံမှု- မိဘကောင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ ထိရောက်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကလေးက အတွေးဖြစ်စဉ်ကို နားလည်ပါတယ်။ ကလေးက မိဘတွေဆီကနေ သင်ယူပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုလည်း တိုးတတ်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
တတ်ကြွစွာနားထောင်ခြင်း- မိဘကောင်းတွေက သူတို့ကလေး ဘာပြောသလဲ ဆိုတာကို တတ်ကြွစွာ နားထောင်တတ်ကြပါတယ်။ ကလေးကို အာရုံစိုက်ခြင်း၊ ကလေးရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေခြင်းတို့ ရှိကြပါတယ်။
နားလည်မှု- မိဘတွေက ကလေးပြောတာကို နားထောင်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ အကြောက်တရားတွေနဲ့ အတွေးတွေကို နားလည်လာကြပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့ကို နားလည်လာတာကြောင့် ကလေးက မိဘကို ယုံကြည်ပြီး အားကိုးလာပါတယ်။
တုန့်ပြန်မှု- မိဘတွေဟာ အကဲဆတ်ကြပြီး သူတို့ကလေးရဲ့ လိုအပ်မှုတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို မဆိုင်းမတွ တုန့်ပြန်တတ်ကြပါတယ်။
စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း- ကလေးတွေ နေ့တိုင်း သွေးတိုးစမ်းတဲ့အခါ ဒီအကျင့်သီလရှိဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ သို့သော် မိဘကောင်းတွေက ကလေးရဲ့အပြုအမှု နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကို နားလည်တတ်ကြပြီး တွေးပေးဖို့ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းတွေ ရှိကြပါတယ်။
လေးစားမှု – ကလေးတွေက ငယ်သေးပြီး များများစားစား မသိသေးပေမယ့် သူတို့ကိုလေးစားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးတွေကို လေးစားခြင်းဆိုတာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးပေါက်ရာတိုင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သို့သော် သင့်ကလေးဟာ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူတို့မှာလည်း လိုအပ်ချက်ရှိတာကြောင့် အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ပါ။
သူတို့မှာ personal space အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ (သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို လေးစားစွာ ဆက်ဆံခြင်း)
သူတို့အချိန်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သူတို့ဆီက မျှော်လင့်တဲ့အရာတွေကို သိဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ( အသွင်ကူးပြောင်းမှုမတိုင်ခင်မှာ မျှတသောသတိပေးခြင်းကို ကမ်းလှမ်းခြင်း)
သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်လာမယ့်အရာတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းအတွက် လိုအပ်ချက်တွေ( သူတို့ဗိုက်ပြည့်နေပြီ(သို့) မဆာဘူးလို့ပြောတဲ့အခါ လေးစားခြင်း) စသည်တို့ ရှိပါတယ်။
ကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ မိဘကောင်းတစ်ယောက်ဟာ perfect ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရမှာမဟုတ်သော်လည်း စစ်မှန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ရပါမယ်။
ကလေးတွေကို ချစ်ခြင်းက မိဘတွေအတွက် သဘာဝအလျောက်ပါလာပြီး သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာပါ။ သို့သော် မေမေတို့ ဒီလိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေကို ပွေ့ဖက်ပြီး နမ်းတာ
သူတို့ကို အမြဲတမ်းချစ်သွားမှာလို့ အာမခံတာ
၂။ ရက်ရောစွာ တန်ဖိုးထားပါ
သင့်ကလေးကို သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအတွက် တန်ဖိုးထားတဲ့အခါ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ခံရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဂုဏ်ယူကြောင်း သူတို့ကို ပြောပြပါ။
သင့်ကလေးအား သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဂုဏ်ယူစွာ ခံစားရစေဖို့ ချီးမွမ်းပေးပါ။
ဘာ့ကြောင့်သူတို့ကို တန်ဖိုးထားရတာလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြပါ။
၃။ နှိုင်းယှဉ်တာကို ရှောင်ပါ
ကလေးတိုင်းက ကွဲပြားခြားနားပြီး ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်ရှိကြပါတယ်။ သင့်ကလေးရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်မီအောင် လှုံ့ဆော်ပါ။ သင့်ကလေးကို အခြားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ သူတို့ကို ညံ့တယ်လို့ ခံစားရစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်
အခြားသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးကို စိတ်မပျက်ပါစေနဲ့။
ကလေးတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ဘက်လိုက်တာမျိုး၊ မျက်နှာသာပေးတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
၄။ နားလည်ဖို့ နားထောင်ပါ
ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကို နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် စီးဆင်းတဲ့အခါ ထိရောက်ပါတယ်။ သင့်ကလေးကို နားထောင်ပေးမှသာ သူတို့ပြဿနာတွေကို နားလည်ပြီး သူတို့ကို ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။
သင့်ကလေးကို ညစာစားနေရင်း၊ အိပ်ရာဝင်ချိန်၊ ကျောင်းဆင်းချိန် စတဲ့အချိန်တွေမှာ နေ့တိုင်းစကားပြောပေးပါ။
အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတဲ့အချိန်တွေမှာ ဖုန်းကြည့်နေတာမျိုး၊ ကွန်ပြူတာကို အာရုံစိုက်နေတာမျိုး ရှောင်ပါ။
၅။ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ချမှတ်ပါ
စည်းကမ်းချက်တွေက သင့်ကလေးအား သူတို့ဘဝမှာ ညွန်ကြားချက်နှင့် စည်းကမ်းတွေကို စိတ်ထဲစွဲမြဲစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး မျှတမှု ရှိရပါမယ်။
စည်းကမ်းတွေနဲ့ ချိုးဖောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
စည်းမျဉ်းတွေကို ဘာချွင်းချက်မှမထားဘဲ တစ်သမတ်တည်းကျင့်သုံးရပါမယ်။
သင့်ကလေးက စည်းမျဉ်းတွေကို မလိုက်နာရင် အရေးယူ ဒဏ်ခတ်တာမျိုးကိုရှောင်ပါ။
၆။ စံပြဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းပါ
ကလေးတွေဟာ သင်ပြောတဲ့အရာထက် သင်လုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကနေ ပိုမိုသင်ယူကြပါတယ်။ ကိုယ့်သားသမီးတွေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်စေလိုပါက-
သင့်ကလေးနဲ့ အခြားသူတွေကို လေးစားပါ
သင့်ကလေးဟာ ရင်းနှီးမှု၊ ချစ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကို နားလည်ဖို့ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံပါ။
၇။ သင့်ရဲ့ကလေးဘဝကို ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားပါ
ကျွန်မတို့ဟာ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ ကျွန်မတို့ မိဘတွေေဆီကနေ မသိစိတ်နဲ့ သင်ယူပါတယ်။ အချို့ဖြစ်ရပ်တွေမှာ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ မတူတဲ့ အရာတွေကို ပြုလုပ်လိုကြပြီး အချို့သူတွေကတော့ မိဘတွေရဲ့ ခြေရာကို လိုက်လျှောက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
သင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့ အရာတွေကို အလေးအနက်စဉ်းစားပြီး သင့်တော်သလို ပြုမှုပါ။
၈။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို သင်ကြားပါ
သင့်ကလေးကို လူမှုရေးစွမ်းရည်တွေ သင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင်လုပ်ဖို့လိုတာက
ကလေးကို သူတို့ရဲ့အတန်းဖော်တွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံဖို့ တိုက်တွန်းပါ။
စကားပြောတဲ့အခါ မျက်နှာလွှဲပြီး မပြောဖို့ သင်ပေးပါ။
သူတို့နဲ့ တွေ့တဲ့လူအားလုံးက သဘောကျစရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ များပြားလှတဲ့ အပြုအမှုတွေကို လက်ခံသင့်ကြောင်း ကလေးအား နားလည်စေပါ။
၁၀။ ကလေးကို အမှီအခိုကင်းစေဖို့ ကူညီပေးပါ
အချိန်တိုင်း ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးမယ့်အစား ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်ဖို့ ကလေးကို သင်ပေးပါ။
သူတို့ကို အမှားကနေ အမှန်၊ အဆိုးကနေ အကောင်းကို ခွဲခြားသိမြင်အောင် ကူညီပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဝင်စွက်ဖက်ဖို့ လိုတယ်လို့ မခံစားရပါက ကလေးအား သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ(သို့) ဝါသနာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါစေ။
သူတို့ကို သင်ကြိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ တင်းပလိတ်တွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့။
Previous articleချောင်းဆိုးနေတဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို ကုသပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ။
Next articleသားသားမီးမီးတို့ကို အမြဲတမ်းပြုံးပျော်နေအောင်ထားသင့်တဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက်